पूजा गर्दा छुटाउनै हुन्न ५ चिज, झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com पूजा गर्दा छुटाउनै हुन्न ५ चिज, झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती ! - खबर प्रवाह
हामी हरेक दिन वा कुनै विशेष दिन पक्कै पनि भगवान् को पूजाआजा गर्छौ तर पूजा गर्दा केहि कुराहरु छुटाउनै हुँदैन । के तपाईलाई ति कुराबारे थाहा छ ?धर्मशास्त्रका अनुसार दूध, दही, घीउ, मह, र चिनीको मिश्रीलाई पूजामा प्रयोग गरिन्छ। यी पाँच चीजबिना पूजा अपूर्ण हुन्छ।यी ५ चिजलाई हिन्दू धर्ममा पवित्र मानिएको छ। जब यी पाँच तत्वलाई मिसाइन्छ तब यसलाई पञ्चामृत भनिन्छ। पञ्चामृतको अर्थ पाँच अमृत हो।
पञ्चामृतको पहिलो अंश दूध हो, जुन हामी गाईबाट पाउँछौँ । पंचामृतको दोस्रो अंश दही हो । तेस्रो भाग घ्यूको अंश हो । चौँथो अंश मह हो । पाँचौँ भाग चिनी हो, जुन पूर्ण अमृत बनाउनको लागि यी सबैसँग मिसाइन्छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पञ्चामृत अर्थात्‌ यी सबै चीजहरूको बनाइएको मिश्रणलाई प्रसादको रूपमा खानेले सबै प्रकारका रोगहरू पनि हटाउँछ। त्यसैले पूजापछि हामी पनि पञ्चामृत लिने गर्छौ स्वयम् प्रचारको प्रतीक हो।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पञ्चामृत अर्थात्‌ यी सबै चीजहरूको बनाइएको मिश्रणलाई प्रसादको रूपमा खानेले सबै प्रकारका रोगहरू पनि हटाउँछ। त्यसैले पूजापछि हामी पनि पञ्चामृत लिने गर्छौ स्वयम् प्रचारको प्रतीक हो।
जान्नुहोस् भगवान शिवको लागि सोमबार किन यति धेरै महत्वपुर्ण हुन्छ ?
घरमा लक्ष्मी माताको कृपा पाउन गर्नुहोस् यी कार्य
महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिन्छ। महिला जसको घर जान्छिन् त्यस घरको परिवारको भाग्य र सफलता उनीसँग जोडिएको मानिन्छ ।तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता कामहरु हुन्छन् जसलाई महिलाहरुले राति गर्नुहुँदैन । यसका कारण उनीहरुको समेत भाग्य फेरिने गर्छ।महिलाहरुले यस्ता कामहरु राति नगरेकै राम्रोः१) सुर्यास्त पछि महिलाहरु कसैको घरमा पनि दुध, दही, नुन, तेल र प्याज लिन […]
सोमबारको दिनलाई भगवान शिवको पूजाको लागि विशेष दिन मानिन्छ । आजको मानिस यति धेरै व्यस्त छ कि उसलाई भगवानको उपासना गर्ने फुर्सद सम्म हुँदैन ।अहिले बढ्दो विज्ञानको अगाडी मानिसले आफ्नो धार्मिक आस्था भन्ने कुराहरु विस्तारै भुल्दै गरेको छ । तर हामीलाई थाहाँ छैन आस्था भनेको के हो ? कुनै पनि धार्मिक कार्यमा तपाई आफ्नो समय […]
महाभारत: धनिहरुलाई जहिले पनि यस्ता कुराका डर हुन्छन् !
महाभारत एक धार्मिक ग्रन्थ मात्र होइन जीवन बारे अनेक पाठ पढाउने महाकाब्य हो। महाभारतका पात्रहरूद्वारा गरिएको गल्तीबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। महाभारतका पात्रहरुले गरेका गल्ती र त्यसको परिणामबाट धेरै ज्ञान लिन सकिन्छ। ईर्ष्या, द्वेष, लालच र सत्ताका कारण के सम्म हुन्छ भन्ने कुरा महाभारतबाट ज्ञान लिन सकिन्छ। सत्ता तथा शक्तिका लागि आफ्नै नजिकका मानिसहरु […]
काठमाडौँ । तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग जोडिएका केही कुराहरुतर्फ ध्यान दिनुभयो भने यसले ठूलो सहयोग हुनसक्छ। अझ एसएलसी उत्तीर्ण भएर आगामी दिनमा कुन विषय […]
संस्कृति, वास्तवमा भन्नुपर्दा, ‘सपना’ भनेको हाम्रो अवचेतन मनमा भएका कुराहरूलाई हामी सामुन्ने देखाउने श्रोत हो भन्न सकिन्छ । हरेक संस्कृतिले ‘सपना’लाई भिन्नाभिन्नै दृश्टिकोणले हेर्ने गर्दछ भने हरेकले आफ्नै तरिकाले सपनालाई व्याख्या गर्ने गर्दछ । मन्दिरको सपनालाई सही तरिकाले अथ्र्याउनको लागि, तपाईँको जीवनमा के–कस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् भनेर ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । तपाईँले कस्तो किसिमको […]
विवाहको निर्णय लिनुअघि के के कुरामा ध्यान दिने ?
काठमाडौं । नेपाली समाजमा अझै पनि विना सोचविचार हतारमा विवाह गर्ने र कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन छ । यसो गदौ दाम्पत्य जीवनमा कैयौं समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जीवनको लयलाई नै अर्कै बनाउने विवाहजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिन किन हामी हतार गर्छौं ? कम उमेरमा विवाह गर्दा यसको अनुभूति नै कमजोर हुन्छ । जसले जीवनलाई […]